Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuba ubuzibuza ukuba ngoobani iingelosi ezisixhenxe ezinkulu, kutheni kwaye yeyiphi Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu? Kuya kufuneka ufunde eli nqaku linomdla apho ungalufumana khona lonke ulwazi oludingayo nolukhangela.
1 Yintoni ekufuneka yenziwe ukwenza uMthandazo kwizithunywa zezulu ezisixhenxe?
2 Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu
2.1 UTHIXO UNGQOQOSHO MIGUEL
2.2 UTHIXO UNGQOQOSHO JOFIEL
2.3 UTHIXO UNGQOQOSHO CHAMUEL
2.4 NGU-ACHANGEL UTHIXO GABRIEL
2.5 UTHIXO ARCHANGEL RAFAEL
2.6 NGU-ACHANGEL UTHIXO URIEL
2.7 NGU-ACHANGEL ZANGO ZADQUIEL
3 Umthandazo kwiingelosi zengelosi ezisixhenxe: Zithini iingelosi ezisixhenxe?
Yintoni ekufuneka yenziwe ukwenza uMthandazo kwizithunywa zezulu ezisixhenxe?
Yintoni ekucetyiswa ukuyenza Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu kukuba kwisithuba ngaphandle kokuphazamiseka kwaye apho sizifumana sizolile kwaye sizolile. Ukholo lubaluleke kakhulu, jolisa amandla akho kwaye ukholelwe ukuba umthandazo uzaliseke.
Lo mthandazo ungenzelwa iingelosi zingelosi ezisixhenxe okanye ungazinikezela kube kanye, konke oku kuyakuxhomekeka kwinjongo kunye nesizathu sayo. Kwimeko yokukhetha ukuthandaza kwingelosi enye enkulu, kufuneka sikhethe ukuba yeyiphi na ingelosi enkulu esiza kuyicela kwaye siza kuthandaza ukuba isithethelele. Kukho ukhetho lokuthandaza kuMichael, uRafael noGabriel abazingelosi zingelosi ezintathu zesangqa sokukhanya kunye nokukhuselwa.
Kuyacetyiswa ukuba wenze Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu Ngendlela egqibeleleyo ukusukela xa usenza umthandazo opheleleyo inzolo noxolo oluvelisiweyo lukhulu. Isenza ukuba siziva sinxibelelene ngakumbi nezi zinto zingcwele nezasezulwini ezikhoyo ukusinceda nokusikhusela. Unokuba nomdla umthandazo eSan Roque.
Nanku umthandazo omkhulu obekelwe iiNgelosi ezisixhenxe ezinkulu, ukuze usebenze kufanelekile ukuthandaza kwindawo yokuthuthuzela noxolo, apho unxulumene kuphela amandla Ezulwini kwaye uthethe oku kulandelayo:
UTHIXO UNGQOQOSHO MIGUEL
«Ingelosi eyintloko uMichael, igorha lokukhanya, ndikhusele yonke imihla kubo bonke ububi.
Ndirhawule ngemitha yakho eluhlaza.
Iqhuba amandla amabi kunye neengcinga zobubi ezikhutshelwe kum.
Ngamana ikrele lakho linganqumla ukungcangcazela okubi, isikrweqe sakho sigubungele isifuba sam.
Ngamana izidalwa ezimnyama zingaqubuda kukhuseleko lwakho olunamandla.
Ndiphe ukuba ndibe ngumphathi wokukhanya kunye nesibindi sokulinganisela.
Susa izigqubuthelo zokungazi kwaye undenze othwele ulwazi.
Ngamana ukukhanya kwakho okunamandla kungathanda ilanga Ndikhusele kwaye undikhanyisele ngalo lonke ixesha, ndikubuza ngokuzithoba.
UTHIXO UNGQOQOSHO JOFIEL
«Ingelosi enkulu enhle uJophiel, umphathi wobulumko.
Ngalo lonke ixesha lokufumana ukhanyiso kwisenzo ngasinye sam.
Ukufikelela kulwazi windows kwi el mundo i-astral kunye nezinto eziphathekayo.
Kwangathi imitha yakho eqaqambileyo emthubi indirhangqile kwaye ivule ukwazi kwam ulwazi lwam kunye nokufunda
Vula ukuqonda kwam.
Vumela ingqondo yam yande.
Ngamana kungazalwa ubulumko entliziyweni yam.
UTHIXO UNGQOQOSHO CHAMUEL
«Ingelosi enkulu enamandla yothando, imfihlelo yobukho bomntu.
Vula intliziyo yam kuthando lwe-Universal, ukuthanda ubuThixo.
Makube kukubonakaliswa kothando ngaphambi kwayo yonke into eyenziweyo.
Phambi koontanga bam, phambi kwezilwanyana, imithi kunye nembewu encinci kwaye ke, ukuba luthando, loo nto inomdla ebomini bam.
Ngamana iray yakho epinki inokwanda kwiseli nganye yam ukuhlwayela uthando kuyo yonke into endiyichukumisayo, kuyo yonke into eveliswa ziingcinga zam.
NGU-ACHANGEL UTHIXO GABRIEL
«Umthunywa ovela kuThixo wemithetho kaThixo.
Ndicela ukuba undinike inkuthazo yokufuna ubuhle kumanqanaba obomi.
Bayeke babe njengemijikelo ye la luna, zahlukile, kodwa zihlala zintle. Yandisa intuition yam ukwazi ukuba yeyiphi indlela oza kuyithatha.
Kwangathi imitha yakho emhlophe ingandikhanyisela ukuze ndibe ngumphathi wokukhanya.
Ngamana ubukho bam bungaba mnandi, amazwi am anothando kunye neemvakalelo zam eziphezulu
Vula amehlo am neendlebe zam ekubonakaliseni ubukhulu bobuthixo.
UTHIXO ARCHANGEL RAFAEL
«Ingelosi eyintloko kwezonyango, ingathi ilitha lakho eliluhlaza elinamandla onke lihambe engqondweni yam ukuvelisa iingcinga eziphilileyo kunye nemibono ejolise kokulungileyo.
Yiya ngomzimba wam ukuze uwugcine ugcwele kwaye usebenze kakuhle kwaye wandise emoyeni wam ukuze uhlale unxibelelana nabantu bentshukumo ephezulu.
Ukuba kufuneka ndijongane nokugula kwam okanye kothandekayo, ke, ingelosi enguThixo uRaphael, ndiyakucela ukuba ungenelele ngamandla akho aphilisayo kaThixo.
Ngamana intliziyo yam ingavelisa iimvakalelo zenkululeko kunye nokuqina.
NGU-ACHANGEL UTHIXO URIEL
«Ingelosi eyingelosi kaThixo yoxolo kunye nokulingana.
Umgcini weetempile zikaThixo.
Ndicela ukuba uphuphume umphefumlo wam ukuze ndikwazi ukuphefumla uxolo, yiyo loo nto ndiyinxalenye yesicwangciso esingcwele.
Oko uyasiqonda isingqisho sobomi. Ndiyakucela kwakhona ngobuninzi, ukuchuma kunye nokukhula kwam kunye nabo bonke abantu emhlabeni.
Wanga umphefumlo wam ungaphumelela phezu kobubi nobumnyama.
NGU-ACHANGEL ZANGO ZADQUIEL
«Ingelosi enkulu enamandla ye-violet ray.
Ndicela ngokuthobekileyo ukuba udlulise yonke into engalunganga ebomini bam.
Ngamana ubukho bam bungafuna utshintsho kweli xesha lokuvuka ngokomoya.
Umphefumlo wam ukhululekile kwimithwalo.
Ngamana iingcinga zam kunye neemvakalelo zam zinzulu kwaye zinikezelwe ngolwazisa.
Ngamana ilangatye lakho le-violet lingenza ukuba ndiqonde ngakumbi kunye nomntu ongcono imihla ngemihla.
Iingelosi zengelosi ezisixhenxe, njengezinye izinto zobuthixo, zihlala zimamele kwaye zinceda abo basweleyo, benika amandla abo ukusombulula iingxaki kunye nenkxaso. Ukholo lwethu lusenza ukuba sibonakale kule mikhosi yasezulwini.
Umthandazo kwiingelosi zengelosi ezisixhenxe: Zithini iingelosi ezisixhenxe?
Iingelosi eziphambili zisixhenxe ziyaziwa njengabameli bakaThixo, banamandla amakhulu asezulwini abawasebenzisayo ukwenza imisebenzi yobuthixo kubomi babantu abathembekileyo kuThixo nakwinto ayimeleyo, bayaziwa emhlabeni nasezulwini. indima abayidlalayo.
Ngenxa yamandla abo amakhulu kunye nokuthatha inxaxheba kubomi boluntu nasezulwini, kubalulekile ukuba wazi ukuba bamele ntoni kunye ne Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu. Abantu abacengceleza le mithandazo bacela ngokuthe ngqo uncedo ukuze bakwazi ukuthatha amanyathelo ngamaxesha anzima, okudinga kwaye nangamaxesha ovuyo.
Ihlabathi lanamhlanje linobundlobongela kwaye linoburhalarhume, ngaphandle kokubala izigidi zexhala umntu anokuliphatha, njengokufumana umsebenzi wokugcina ikhaya, ukunqanda ukosulelwa yiCovid-19 kunye noxinzelelo olungapheliyo oluhlukumeza umntu. Ngesi sizathu nangaphezulu, eyona nto inokubakho yinkxaso kunye noncedo luyimfuneko, apha kuyenzeka Umthandazo kwiingelosi ezisixhenxe ezinkulu.